भारतले ब्याटिङ रोज्यो, को–कोले पाए प्लेइङ ११ मा मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
भारतले ब्याटिङ रोज्यो, को–कोले पाए प्लेइङ ११ मा मौका?
काठमाडौं, साउन १९ । वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टि–२० सिरिजको दोस्रो खेलमा भारतले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति ८ः१५ बजेदेखि अमेरिकामा सुरु हुँदैछ ।
वेस्ट इन्डिजको प्लेइङ ११ः कार्लोस ब्रार्थवेट (कप्तान), इभन लुइस, शिमरन हिटमायर, निकोलस पूरन, किरण पोलार्ड, सुनील नारायाण, शेल्डन कट्रेल, ओशन थोमस, खरी पिर्रे, रमन पावेल र कीमो पउल ।